अण्डाको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च, कति पुग्यो ? अण्डाको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च, कति पुग्यो ? Canada Nepal
चितवन - नेपाल कुखुराको मासु र अण्डा उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको मुलुक हो । चितवनलाई पोल्ट्रीजन्य उत्पादनमा अग्रणी जिल्लाका रूपमा लिइन्छ । कोरोना महामारीपछि भने अण्डाको उत्पादनमा गिरावट आएको छ । उत्पादनमा गिरावट आएपछि अण्डाको मूल्य बढेको छ ।
आश्विन २२, २०७८ शुक्रवार १४:४८:२१ बजे : प्रकाशित